FANOMEZAM-BONINAHITRA : Tonga nitsena an’i Goly Be teny amin’ny PK18 i Mahajanga
Anisan’ireo tonga maro nitsena ny nofo mangatsiakan’i Goly be teny amin’ny sampanana Boanamary PK18 Andriantomanga Mokhtar, governoran’ny Faritra Boeny. 9 février 2021
Anisan’ny nitsena ny razana tao i Ahmad, filohan’ny CAF teo aloha. Araka ny fandaharam-potoana dia niaretan-tory tao ny alin’ny alatsinainy ny razana. Ny talata 26 Janoary dia nentina teny amin’ny stade Rabemananjara, nialoha ny niaingana omaly ihany ho any Mandritsara, Faritra Sofia, toerana izay handevenana an’Itompokolahy Ferdinand Rafalimanana na i Goly Be, mpilalao baolina kitran’ny FCO Mahajanga sy ny Club M fahiny. Tsiahivina moa fa anisan’ny nandray anjara tamin’ny fampodiana ny vatana mangatsikany eto an-tanindrazana ny mponin’i Mahajanga